Radio Tifadee लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्न जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ : डिएसपी सिंह
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान गएको आईतबारबाट सुरु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा वर्षैपिच्छे मनाईने यो अभियान अन्तर्गत नेपालमा पनि १६ दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन् । यो अभियानको अवधिभर सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले हिंसाका घट्ना हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने गर्छन । आगामी ५ वर्ष भित्र हिंस मुक्त समाज निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । तर महिला हिंसाका घटना बर्षेनी बढदै गएको सरकारको तथ्यांकले बताउँछ ।
महिलामाथी हुने विभेदका घट्ना कमी ल्याउनमा प्रहरी प्रशासनको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । हिंसामा परेकाहरुलाई न्याय दिन र पिडकलाई कार्वाही गर्ने अधिकार प्रहरीसंग छ । जनतालाई सुरक्षा दिने निकाय प्रहरीले नै कहिकतै अपराधीहरुलाई जोगाएको भनेर आलोचना पनि हुने गर्छ । लैगिंक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भ पारेर तिफदी सहकर्मी सुमित श्रेष्ठले रामेछापका प्रहरी प्रमुख डिएसपी अमरेन्द्र बहादुर सिंह संग जिल्लामा हुने महिला हिंसाका घटना र त्यसको निराकरण तथा अभियानकै सन्दर्भमा प्रहरी कार्यालयले गर्ने कार्यक्रमका विविध विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ ।
डिएसपी साब रेडियो तिफदीमा यहाँलाई स्वागत छ ।
जिल्ला स्तरमा अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा लैंङ्गिक हिंसा सम्बन्धि उजुरीहरु बढेको छ वा घटेको छ रु अवस्था के छ ?
उमेरको हिसावले परिपक्व नभएका तर लैंङ्गिक हिंसामा परेका बालबालिकाको पनि उजुरीहरु आउने गरेको छ ?
केहि समय पहिलासम्म लैंङ्गिक हिंसा भनेको महिलाहरुमाथि हुने हिंसा भनेर परिभाषित गरिन्थ्यो । नेपाली समाजको बास्तविकता हेर्दा पनि लगभग महिलाहरुमाथि हुने हिंसाका घटनाहरु नै बढि देखिन्छ । अहिले जारी भएको मुलुकी ऐन पछाडि पूरुषहरु पनि हिंसा सम्वन्धि उजुरी लिएर आउने गरेका छन् रु वा के छ ?
लैंङ्गिक हिंसामा परेका तर स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पँहुच नहुने पीडितले प्रहरी चौकी, ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि उजुरी दिन सक्छन् रु वा उजुरीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै आउँनुपर्छ ?
लैंङ्गिक हिंसाका घटनामा सुरक्षाका हिसावले प्रहरीसँग सम्वन्धित् हुन्छ । यस्ता घटना न्यूनिकरणको लागि प्रहरीको भूमिका के हुन्छ रु र प्रहरीले अहिलेसम्म के गर्दै आएको छ ?
सबै घटना प्रहरीसँग सम्वन्धित छैनन् । अहिले सामाजिक सुरक्षा स्थानीय तहमा पनि छ । त्यसैगरी शान्ति, सुरक्षा र अन्य सुरक्षाको हकमा नेपाल प्रहरीसँगै अन्य प्रहरी संगठनसँग पनि जोडिएका छन् । यस्ता घटना न्यूनिकरणको लागि सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम पनि हामीले समुदायमा लगेका छौं । हामीले सामुदायिक प्रहरी अन्तर्गतको सेवा गाउँ, टोल र विद्यालयहरुसम्म पु¥याएका छौं । विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रम लैजानुको उद्देश्य भने विद्यालयमा पढ्दै गरेको विद्यार्थी जसले घरेलु तथा अन्य समस्याको बारेमा जानकारी पाएको छ वा महसुस गरेको छ, सुनेको वा देखेको छ भने विद्यार्थीको माध्ययमबाट सूचना लिने, र विद्यार्थीबाट पनि त्यो घटना न्यूनिकरणको लागि के गर्न सकिन्छ रु भन्ने विषयमा सचेतना जगाउनु पनि रहेको छ । त्यसैले यो सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सफल भयो र यसको सबैतिर प्रभाव पार्न सकियो भने मात्रै पनि यसले समाजमा हुने घटना न्यूनिकरणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
ठ्याक्कै तपाइले भनेको जस्तो यो उमेर समूहको भन्ने चाँहि छैन । आत्महत्यामा उमेर समूह भन्ने छैन । मेरो बुझाइमा आत्महत्या पूर्वको मानसिक अवस्था नै आत्महत्याको मुख्य जिम्मेवार पक्ष हो । कस्तो खालको मानसिक असर परेको छ रु अथवा कुन् मानसिक तनावको कारण उसलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको छ रु त्यो नै घटनाको मुख्य कारण हुने रैछ ।
लैंङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारी, गैह्रसरकारी वा अन्य सरोकारवाला पक्षले के गर्नुपर्ला रु के गर्न आवश्यक देख्नु भएको छ र?
यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि आम रुपमा सचेतना अभिबृद्धि गर्न आवश्यक छ । जस्तै गाउँ, टोल तथा विद्यालयमा लैंङ्गिक हिंसाको बिरुद्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । मानसिक तनाब सिर्जना हुने कारण र तनाब व्यवस्थापनका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ । मानसिक तनाब सबैमा हुन्छ । मात्र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने रु समस्या सिर्जना भयो भने के गर्ने रु कुन तहको समस्या समाधानको लागि कहाँ जाने रु कहाँबाट आफ्नो समस्या समाधान हुन्छ रु त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन ग¥र्यो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई । किनकी सरकार सबैको मनमनमा जान त सक्दैन ।
मान्छेको घर घरमा पनि सरकार जान सक्दैन । प्रहरीले एउटा निश्चित एरियाभित्रको क्षेत्रसम्म मात्र सूचना दिन सक्छ । बाँकी भनेको परिवारको सदस्यहरु बीचमा आपसी छलफल र परामर्सको आवश्यक छ । त्यसैले परिवार, समाज वा टोलको यूनिटले पनि जनचेतनामूलक अभियान चलाउनु आवश्यक छ । समुदायमा समुदायले समुदायका लागि चलाएको अभियान घरघरमा छिर्छ, परिवार परिवारमा पुग्छ । कोठा कोठामा पुग्छ ।